Maxaa la sameeyaa haddii iTunes uusan aqoonsaneyn iPhone-kaaga | Wararka IPhone
Waxa la sameeyo haddii iTunes uusan aqoonsanayn iPhone-kaaga
Intii aan ku guda jirnay safarkayaga aaladaha Apple, gaar ahaan kuwa aniga oo kale ah, waxay u isticmaalaan Windows-ka iyo kumbuyuutar noocyo kala duwan ah maalinba maalinta ka dambaysa. Maxaa dhacaya markii iTunes uusan ogaan iPhone-keena?Hagaag, wax badan ayaa naga xanaaqsan, maxaa yeelay had iyo jeer waxay dhacdaa markay tahay waqti khaldan, markaan u baahanno inaan soo celino ama wareejinno feylasha waaweyn sabab kastoo jirta. Maanta waxaan ku siineynaa talooyin dhowr ah si aad u xalliso xaaladdan adigoon timaha madaxaaga ka jiideyn, ha walwalin, wax walba waxay leeyihiin xal.
1 Dib u bilaw kumbuyuutarkaaga iyo iPhone-ka
2 IOS iyo iTunes marwalba way cusbooneysiiyaan
3 Isku day xiriiro kale
4 Nadiifi hillaaca on your iPhone
5 Soo celi goobta iyo xogta gaarka ah
6 Wali ma shaqeynayo? Tag Apple
Dib u bilaw kumbuyuutarkaaga iyo iPhone-ka
Waxay umuuqataa wax iska cad, laakiin waxaa jira dad badan oo aan sameynin, badanaa reboot ayaa kaa badbaadineysa dhibaatooyin badan, wax walboo dhici kara, feylal ku jira keydka iPhone oo abuuraya isku dhac, cusbooneysiin kumbuyuutar ah oo aan kuu oggolaaneynin inaad wax isku xirto ... iwm Si aad dib ugu bilawdo iPhone-kaaga waxaad si fudud u riixaysaa badhanka Awoodda iyo badhanka Guriga isla wakhtigaas illaa inta astaanta Apple ay muuqanayso.
IOS iyo iTunes marwalba way cusbooneysiiyaan
Qaarkood waxay leeyihiin cabsi cabsi leh oo cusbooneysiin ah, laakiin lid ku ah waxa ay dad badani u maleynayaan, kuwan waxaa loo bilaabay in lagu xalliyo dhibaatooyinkii hore, mid ka mid ah dhibaatooyinkaasina wuxuu noqon karaa isku xirnaanta iPhone-ka iyo iTunes tusaale ahaan, sababtaas darteed, Waxaan kugula talineynaa inaad had iyo jeer ku hayso iPhone-kaaga nooca ugu dambeeyay (ama maya, waxay kuxirantahay waxaad rabto, qorshe maahan inaad iska bixiso Jailbreak sidoo kale), laakiin wixii ka sarreeya dhammaantood waxay leeyihiin nooca ugu dambeeya ee iTunes, maaddaama ay tahay midda oggolaanaysa ama aan ahayn xiriirinta iPhone-ka.
para cusbooneysii iTunes:
Windows: Caawinaad> menu sare> Hubi cusboonaysiinta
Mac: Badhanka ITunes> Hubi cusbooneysiinta
Si aad u cusbooneysiiso iPhone-kaaga, sida had iyo jeer ugu jirta Settings> General> Cusboonaysiinta Software-ka.
Isku day xiriiro kale
Waxay badanaa sabab u tahay da'da isku xirnaanta, wasakhda ama faahfaahin kale oo yar, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo mid kale oo ka mid ah USB-ga kumbuyuutarkaaga ama fiilo kale oo rasmi ah oo aad gacanta ku hayso. SHaddii fiilada aad isticmaasho aysan ahayn MFi ama rasmi, halkaas waxaad ku leedahay furaha dhibaatada. Xusuusnow inaad had iyo jeer isticmaasho fiilooyinka asalka ah ama MFi, oo had iyo jeer dammaanad qaadaya hawlgal sax ah oo aamin ah, kuwa ka socda Amazon Basics tusaale ahaan waa kuwo la awoodi karo.
Nadiifi hillaaca on your iPhone
Waad la yaabi doontaa waxa halkaa ku uruursan kara, caday fudud, dabacsanaan iyo samir waxaad ka saari kartaa cudbi iyo marada ku filan oo ay ku samayso maro. Si tartiib ah oo taxaddar leh u samee, igelinta caarada oo si dulqaad leh uga qaadaysa caarada ku hartay gudaha. Waxaan waayey tirooyinka IPhone-ka ee aan ku soo dallacayn in aan "sidaas u hagaajiyey" saaxiibbaday iyo saaxiibbaday.
Soo celi goobta iyo xogta gaarka ah
Badanaa xogtan qaarkood waxay abuuri karaan khilaaf gaar ah oo aan u oggolaaneyn isku xirnaanta, tusaale ahaan haddii aan siinnay "ha aaminin" markii aan ku xirnay iPhone-ka kombiyuutarka markii ugu horreysay. Ha welwelin, qaabdhismeedkan shilka ah wuxuu xal leeyahay haddii aan sii wadno talaabooyinka soo socda:
Hoos ugu sii riix submenu keddib, kii ugu dambeeyay
Xullo "dib u dejiso goobta iyo xogta gaarka ah"
Hadda waxaad dib u xiri kartaa iPhone-kaaga oo mar labaad ayey ku weydiin doontaa haddii aad ku kalsoon tahay kombiyuutarkan iyo in kale, markan waa inaad ka taxaddartaa inaad gujiso "Trust" si sax ah.
Wali ma shaqeynayo? Tag Apple
Haddii qalabkaagu ku jiro labada sano ee ugu horreysa iibsiga, Yurub waxaan ku xusuusineynaa inay leedahay damaanad, oo leh xoogaa futooyin ah, sannadka ugu horeeya ee dammaanadda waxaa daboolaya adeegga farsamada Apple, tan labaadna waxaa bixin doona hawlwadeenka taleefanka in waxaad iibisay boosteejada ama dhexdhexaadiye kale. Haddii Apple wax ku faani karto, waa adeeg farsamo, markaa haddii aad ku haysato Dukaan Apple agtaada ah, haddii aad damaanad haysato iyo haddii kaleba, halkaas u aado, waxaa had iyo jeer jiri doona Genius diyaar u ah inuu ku caawiyo oo laga yaabo inaad dhibaatada si fudud ku xalliso in aadan qiyaasi karin.
Intaas waxaa sii dheer, haddii dhibaatadu ay tahay uskag oo aadan ku dhiiran inaad nadiifiso, dukaanka Apple Store kama waaban doonaan inay ku caawiyaan daqiiqado gudahood (way igu dhacday aniga), iyo sidoo kale, inay fursad u helaan ku wareeji oo arag aaladaha ugu dambeeyay ee kuwa Apple leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Waxa la sameeyo haddii iTunes uusan aqoonsanayn iPhone-kaaga
Luis J. LeBron dijo
Xiriiriyaha ma tagayo ...
Jawaab si Luis J. Lebrón
Juan Ciise Bouzas Grau dijo
Xiriirkii ayaa jabay
"404 lama helin"
Jawaab Juan Jesus Bouzas Grau
Waxaan joojiyay isticmaalka iTunes ka badan hal sano ka hor, waxa kaliya ee ay aniga ii shaqeyso waa inaan soo celiyo. Muusikada waxaa hoos u dhigay Spotfy ka dibna wax kasta oo kale oo ka socda iPhone.
Jawaab Jorge Luis Fernandez Roman
Seba Wolf dijo
Ku jawaab Seba Lobo
Kaliya waxaan isticmaalaa iTunes, si aan u waafajiyo albumyada sawirada oo aan u dhigo muusikada bilaashka ah wax kale
Jawaab Pili Gonzalez Lacámara
Jawab Kenneth Alvarez
Josue Patiño C. dijo
Jawaab Josue Patiño C
"Joometri Wars 3: Cabirka" oo hada laga heli karo App Store. Dib u eegid.